China Semi-auto Ultrasonic Tube Sealer HX-007 mveliso kunye nabathengisi | Umatshini weHX
Umthamo 10-18pcs / min
Ubukhulu L850 * W600 * H620mm
Ubungakanani bokupakisha L960 * W710 * H840mm
I-NW / GW 75kgs / 110kgs
* Itheyibhile ephezulu, uyilo olusebenzayo kunye noludibeneyo, ulungele ukusebenza kunye nomthengi ophuma kwifilitha kubavelisi bokuqalisa, uvavanyo lweemarike, okanye isampulu yokuvavanywa kwelebhu.
* Yondla ngesandla ityhubhu, cofa iqhosha lokuqala, umatshini unokuchonga ngokuzenzekelayo uphawu lobhaliso, ungene kwisikhululo sokutywina, ngokutywina (ngokufaka iikhowudi), ukuphela kokucheba kwaye uphume ngokulula kubasebenzi.
* I-PLC ngenkqubo yolawulo lokuchukumisa isikrini, ukubonelela ngamava okusebenza ngobuhlobo
* Isenzo ngasinye sinokulawulwa ngokuzimeleyo kwiscreen sokuchukumisa, silungele uhlengahlengiso phakathi kwemibhobho eyahlukeneyo. Abasebenzi banokusebenzisa ityhubhu enye ukuseta zonke iindawo, ukonga ixesha elininzi kunye nezinto eziphathekayo.
* ”IPanasonic” isivamvo esinovakalelo oluphezulu esineemoto ezihambayo, sinokulandela umkhondo wobhaliso ngokuchanekileyo.
* Ukubumba ikhowudi kuyilo lwendawo yokuma, xa ubuyisela umhla wokufaka iikhowudi, akukho mfuneko yokulungisa ibhalansi.
* Isibiyeli esiphakamisayo sokunyusa ngokukhawuleza ngewheel yesandla, sinokuhlengahlengisa ngokusekwe kubude beetyhubhu ezahlukeneyo.
* Ukhuseleko lwe-Acrylic Cover, ukhuseleko ngakumbi kunye nezinto ezintle, ezichasene nokubambana.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kukutya, amayeza, izinto zokuthambisa, imichiza kunye nezinye iiplastiki, i-PE, i-aluminium yokutywina ityhubhu yokutywina.
1. Abanini beetyhubhu ngobubanzi obahlukeneyo
Egqithileyo Iimilo ezizenzekelayo zeUltrasonic Tube Sealer yeeTyhubhu eziKhethekileyo zeHX-003
Okulandelayo: Ukugcwaliswa kwebhotile ezenzekelayo kunye noMatshini wokuCoca i-HX-20AF
Itywina leLdpe Tube
Semi oluzenzekelayo Tube Sealer
Umatshini wokuTywina iTyhubhu